တက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေးနှုတ်ခမ်း, မျက်ခမ်း, တက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေး remuver အဘို့အမျက်ခုံးလေဆာ
တက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေး - အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများ
အဘယျသို့သောယဇ်ပူဇော်ပွဲကို၎င်းတို့၏သဘာဝအအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ပေးဖို့, သာအဆင်းလှသောလိင်မသွားကြပါဘူး။ သူတို့ဟာအမြဲအောင်မြင်သောဆုံးမနေသောမည်သည့်စမ်းသပ်ချက်များအတွက်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဒဿနပညာရှင်ပြီးနောက်ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း - တက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေး။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတဲ့အလှပြင်ဆိုင်များတွင်ဖျော်ဖြေနေသည်။
ပုံ၏ဖယ်ရှားရေးမှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်, သင်ဂရုတစိုက်အသုံးပြုတဲ့အရောင်ခြယ်များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ဆိုးဆေးပါလျှင်တက်တူးထိုးမျက်စိသို့မဟုတ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများ laser ဖယ်ရှားရေး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါဟာတက်တူးထိုးဖယ်ရှားသောပိုပြီးမျက်နှာပြင်ကုသမှု, လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီနောက်ဆက်တွဲသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်ရလဒ်ယခင်တဦးတည်းအပြီးထက် သာ. ကောင်း၏။
သငျသညျလုံးဝတက်တူးထိုးဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်ရှိမရှိရှာဖွေ, သင်သည်ဤကိန်းဂဏန်းကိုပြု၏ရှိရာအလှပြင်ဆိုင်သို့ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအသုံးပြုသောခြယ်ပစ္စည်းများ၏ဓာတုဖော်မြူလာနှင့် prompt ကိုဖျက်သိမ်းရေးနည်းလမ်းရှိပါတယ်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ် "အလှဆင်။ " ဒါဟာ 2,3နဲ့4hkomponentnye သေံထက်အခြေစိုက်စခန်းနှင့် coupler အရိပ်ပေါ်လေဆာရောင်ခြည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခန့်မှန်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အဆုံးစွန်သောနှုတ်ခမ်းများနှင့်မျက်ခုံး၏အရောင်ချယ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
(ဒီတက်တူး၏3နှစ်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်) အရိပ်နွမ်း။
သို့သော်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သိသိသာသာအားနည်းချက်များရှိနေသည်။ ဤရွေ့ကားထိုကဲ့သို့သော features တွေပါဝင်သည်:
စစ်ဆင်ရေး၏ကြာချိန် (ကအချိန်မရွေးတက်တူးထိုး၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေးတွေးဝံ့စရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အထူးကု 1.5 လအတွင်းတစ်ခုကြားကာလနှင့်အတူ 3-4 ကြိမ်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်);
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသူ့ဟာသူ (ထုံဆေးအောက်မှာ) နာကျင်မှု့မရှိတဲ့ဖြစ်သော်လည်း "လွှတ်ပေးရန်" ကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံရှိပါတယ်။
အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်၏ဖယ်ရှားရေးဒီနည်းလမ်းကအခြားနည်းလမ်းများကျော်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်ဟာပျော့တစ်ရှူးမထိခိုက်စေဘဲ, 3-5 မီလီမီတာ၏တပ်မက်လိုချင်သောအတိမ်အနက်ကိုစိမ့်ဝင်သွားတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးအတွင်းဆံပင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြီးစိတ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆန္ဒရှိပါက, မျက်ခုံးအရောင်ခြယ်သင့်လျော်သောက hue ဆိုးဆေးအသုံးပြု။ နာရီဝက်၏အရှည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းမျက်စိကိုအထူးအကာအကွယ်မျက်မှန်နှင့်အတူပိတ်ထားသည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကောက်ယူ laser ဖယ်ရှားရေးတက်တူးထိုးမျက်ခုံး:
မိတ်ကပ် remover Perform ။
ပုံဆွဲနေတဲ့ပြည့်စုံဖယ်ရှားရေးဘို့ 2-3 သို့မဟုတ်ပင် 4-5 လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်ခြယ်ပစ္စည်း deposition ၏အတိမ်အနက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မဖြစ်နိုင်တာတက်တူးထိုးရာစုလက်ငင်းဖယ်ရှားရေး။ ပိုမိုလွယ်ကူလျှော့အနက်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း, ဒါသည် "ဖျက်" မြှားလျင်မြန်စွာ။ အခြေအနေကအနီ, အဝါရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်နဲ့ကွပ်မျက်ခံရရေးဆွဲအတူပိုဆိုးသည်။ အစိမ်းရောင်ခြယ်ပစ္စည်း - အရှည်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး။ သငျသညျဖယ်ရှားရေးလေဆာအသက်အရွယ် Tattoo လိုလျှင်ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်တို့ကိုသည်းခံခြင်းလိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါခြယ်ပစ္စည်းတဖြည်းဖြည်းထွက်လာမယ့်ကြောင့် output image ကို, ရုပ်ဆိုးကြည့်ပေမယ့်ရလဒ်အချိန်တန်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် clients, စစ်ဆင်ရေးလုံခြုံပြီးထိရောက်သောရှိမရှိအဖြစ်သံသယ excruciate လိမ့်မည်။ တချို့ကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလေဆာရောင်ခြည်ကုသမှုပြီးနောက်အမာရွတ်များဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။ သို့သော် cosmetologists ပညာရှင်များထိုကဲ့သို့သောအကျိုးဆက်များသတိပေးကြပါတယ်။ စနစ်တကျ configure လုပ်သောအခါ, device ကိုကျန်းမာတဲ့တစ်သျှူးမှလေဆာရောင်ခြည်ကိုထိပေမယ့်ကိုသာခြယ်ပစ္စည်းအကျိုးသက်ရောက်ပါဘူး။
နှင်းခူနှင့် အရေပြားရောင်ရမ်း ;
သငျသညျအမြဲတမ်းနှုတ်ခမ်းမိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီ, ဖုန်နှင့်မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်ကနေမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးသေချာပါစေ။ မျက်လုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ခြင်း, အရေပြားတခုတခုအပေါ်မှာထုံဆေးလျှောက်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါရေခဲတစ်ဦးအပိုဆောင်း analgesic အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ချက်ချင်းလေဆာရောင်ခြည်ကုသမှုပြီးနောက်မျက်နှာပြင် Sani exuding, အသေးစားဒဏ်ရာများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, ဤအရာအလုံးစုံသက်ရောက်မှုပျောက်ကွယ်သွား။
အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ဤဓာတုနည်းလမ်း။ Remuver - ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးအထူးရပ်ဆိုင်းမှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်။ ဒီ tool ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်:
ဒါကြောင့်အပေါ် benzoic အက်ဆစ်နှင့်။
ရပ်ဆိုင်းမှု၏စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမရိုးရှင်းပါသည်။ အသားအရေနှင့်အဆက်အသွယ်ပြီးနောက် Remuver ခြယ်ပစ္စည်းမော်လီကျူးများနှင့်ဆက်စပ်သူတို့ကိုထွက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့။ ဆန္ဒရှိလျှင်, client ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းသွားခဲ့ရာသူမ၏ပြသရန်မာစတာကိုမေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာမျက်နှာပြင်အစိမ်းရောင်ဥတု (ရောင်စုံခြယ်ပစ္စည်းအရောင်အတွက် outputted သည်) အပေါ်ကြည့်ဖို့ကိုအလွန်အံ့သြသွားလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, သတ္တုကြောက်စရာ oxides: သူတို့ကတစ်ရှူးနှင့်သွေးမထိခိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကောင်းပါတယ်။ ထို့အပြင်ရပ်ဆိုင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အသီးမသီးအက်ဆစ်, ဒါအဖြူရောင်, မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမှမကြောက်ပါဘူး။
Remuvera သုံးပြီးနှုတ်ခမ်း, မျက်ခုံးနှင့်မျက်တောင်များတက်တူးထိုး၏ဖယ်ရှားရေး contraindications ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်:
hyper- သို့မဟုတ် hypotension;
ဝက်ခြံ, psoriasis နှင့်အခြားအရေပြားရောဂါများ;
တက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေး remuverom မျက်ခုံး
ပုံစံ hatching ဒီနည်းလမ်းလေဆာရောင်ခြည်နဲ့တစ်ခုခုပင်ကထက်မလွန်အတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်။ ထို့ကြောင့်မမှတ်မိလောက်အောင်အရေပြားအရောင်ခြယ်အောက်မှာမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမိတ်ကပ်မျက်ခုံးဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ, လေဆာရောင်ခြည်အားလုံးရိပ်အသိအမှတ်မပြုနိုင်မဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်မေးခွန်းပေါ်ပေါက်။ အဆိုပါရပ်ဆိုင်းမှုအလွယ်တကူဆေးသုတ်ထုတ်အရောင်များနှင့်ထုတ်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါခြယ်ပစ္စည်းနက်ရှိုင်းစွာမိတ်ဆက်လျှင်လည်းလေဆာပုံစံ၏ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ နှင့်ဤအမှု၌ကိုမနိုင်အမာရွတ်များ၏မရှိခြင်းသေချာစေရန်။ နောက်ထပ်အရာ - တက်တူးထိုးမျက်ခုံး remuverom ၏ဖယ်ရှားရေး။ ဤတွင်, အရာအားလုံး "အံ့သြဖွယ်များ" မပါဘဲနေဖြင့်တတ်၏။
အဆိုပါရပ်ဆိုင်းမှုအရေပြား၏သေးငယ်တဲ့ဧရိယာမှလျှောက်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့ကဲ့သို့တူညီသောပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. အောက်ပိုင်းအလွှာပုံစံကိုဖယ်ရှားရန်။
Wizard ကိုစနစ်တကျ resurfacing ဘို့ဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်လမ်းညွှန်မှုပေးပါသည်။
တက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေး remuverom မျက်စိ
အရက်ယမကာများစားသုံးမှုစွန့်ခွာရန်အလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီ3ရက်။
ဒီ slurry သုံးပြီးမစင်အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်အသက်အရွယ်အလွန်အမင်းမလိုလားအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကချွဲအမြှေးပါးပေါ်ရရှိသွားတဲ့, လေးနက်သောရူပါရုံကိုပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လျှင်မူးယစ်ဆေးမျက်စိကိုများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သာအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအပ်နှံ။ က "ကြမ်းတမ်းအနား" ထွက်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီစစ်ဆင်ရေးကိုအပေါငျးတို့သရှုပ်ထွေးပွေလီလှနှင့်အန္တရာယ်များသိတယ်။
နှုတ်ခမ်း remuverom ၏တက်တူးထိုး၏ဖယ်ရှားရေး
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီ, လူနာသတ်မှတ်ထားသောဆေး protivogerpesnye ။3ရက်စီစဉ်ထားခွဲစိတ်မတိုင်မီစတင်နိုင်ရန်သူတို့ကိုရိုက်ယူခြင်း။ သငျသညျနှုတ်ခမ်းအတက်တူးကိုဖယ်ရှားရှေ့မှာလည်း, ထိုကျွမ်းကျင်သူထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင့် contraindicated မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်, အမျိုးသမီးများတင်သွင်းခြင်း၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ အလွန်တူညီစစ်ဆင်ရေးအချိန်အများကြီးမယူပါဘူး: 30 မှ 60 မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ပါသည်။ ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည်နှင့်နှုတ်ခမ်းအနောက်ဆက်တွဲလျော်သောစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအမှုအရာတို့ပါဝင်သည်:
ပထမဦးဆုံး3ရက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီး, အရေပြား anti-inflammatory မုန့်နှင့်အတူ lubricated ရပါမည်။
သင်ကအပေါ်ယံလွှာ (ကသဘာဝကျကျပယ်ကျကြရမည်ဖြစ်သည်) မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထင်ရှားပေါ်ထွန်းချွတ် rip လို့မရပါဘူး။
အဆိုပါပြန်လည်နာလန်ထူကာလဆိုလာရီယံများနှင့် sunbathing တားမြစ်သည်။
မည်သည့်အလှကုန်ပစ္စည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေမယ့်အန္တရာယ်သယ်ဆောင်။ ကသေးငယ်သည်, သို့သော်ဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်။ တက်တူးထိုးပြီးနောက်ဖယ်ရှားရေးလေဆာဆိုးကျိုးများလည်းပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခဏကအကြောင်းကျနော်တို့အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်စီစဉ်နေကြသည်တဲ့သူတွေကိုမေ့လျော့လို့မရပါဘူး။ သင်တက်တူးထိုးမျက်ခမ်းကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီ, မျက်ခုံးသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးဆက်များနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်ချိန်ဖို့လိုတယ်။ အသုံးအများဆုံးရောဂါများထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များစဉ်းစားနေကြသည်:
(လေဆာဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူ) ဆံပင် bleaching;
အောက်ပိုင်းစှနျး၏ Reticular varicose သွေးပြန်ကြော
Darsonvalization - လက္ခဏာများနှင့် contraindications
အမျိုးသမီးတွေ 40 နှစ်တာနွေရာသီဗီရို
Lizobakt - ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်
Alpaca နှင့် merino ထံမှစောင်
Zucchini ၏ Fritters
ဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အာဒံကို Levine နှင့် Behati Prinsloo ဝမ်းချွတ်ရင်ဆိုင်ခဲ့